Home Wararka Pompeo: Iran waa saldhigga ugu weyn ee Al-Qaacidda
Pompeo: Iran waa saldhigga ugu weyn ee Al-Qaacidda
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dowladda Iiraan ku eedeeyay in kooxda jihaad doonka ah ee al-Qaacida ay u oggolaatay in “saldhig cusub” ay ka sameysato halkaas.
“Si ka duwan Afghanistan, markii al-Qaacida ay isku qarineysay buuraha, al-Qaacida maanta waxay gabbaad ka heshaa maamulka Iiraan oo difaacaya,” ayuu yiri.
Mr Pompeo wax caddeymo ah uma uusan keenin eedeymahaas.
Wasiika Arrimaha Dibadda Mohammad Javad Zarif ayaa hadalka Pompeo ku tilmaamay “been dhalineysa dagaal”.
Bishii November ee la soo dhaafay, Iiraan ayaa beenisay war ku saabsanaa in taliyihii labaad ee al-Qaacida Abdullah Ahmed Abdullah, oo sidoo kale loo yaqaanno Abu Muhammad al-Masri, ay ciidamo Israa’iil ah ku toogteen Tehran, kaddib codsi uga yimid Mareykanka.
Previous articleMaxa loo kala diray Golaha Degaanka magaalada Gaalkacyo?
Next articleMaxaa la Gudboon Qoorqoor iyo Guudlaawe si Degaanadooda ay Rabshado uga Badbaadsadaan?
Qof Soomaali ah oo shan qof ku dhaawacay weerar uu ka...
Ururka Al Shabaab oo weeraray Wadaad caanka ahaa Magaalada Jowhar